Elle Evans Sawirro Qaawan Iyo Muuqaallo Jilicsan Oo Isku Duuban - Diiwaanka Filimka Caanka Ah
Elle Evans Sawirro Qaawan Iyo Muuqaallo Jilicsan Oo Isku Duuban
Fiiri aktarada maqaarka ah ee jilicsan iyo qaabka kulul, Elle Evans oo qaawan iyo sawiro galmo ah oo ay u sameysay joornaalka 'Playboy magazine' iyo qaar ka mid ah boggaga cad. Sidoo kale, waxaan leenahay muuqaalada galmada ee qaawan ee ugu sarreysa ee 'Muse' iyo muuqaalada kale ee galmada ee gabadhan!
Elle Evans waa gabar 30 jir Mareykan ah oo qaab jiliin ah. Waxay ku nooshahay oo ka shaqeysaa magaalada Los Angeles, Kaliforniya. Sexy Elle ayaa caan ku ah muuqaalkeeda muuqaalka muusikada Robin Thicke ee 'Lines blurred' oo ay ka muuqato Pharrell Williams. Iyadu sidoo kale waa mid ka mid ah wejiyada 'NYX Cosmetics'. Evans waa horyaal lahaansho tartan hore oo qabatay Miss Louisiana Teen USA 2008. Sidoo kale, waxay ku tartantay tartanka Miss Teen USA 2008, halkaas oo ay ka gashay kaalinta saddexaad. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga xayuubiyay darajadeedii gobolka ka dib kow iyo toban bilood ka dib markii loo xiray dhacdo ka dhacday makhaayad, halkaas oo marijuana laga helay boorsadeeda. Iyada iyo saddex saaxiibadeed ah ayaa lagu eedeeyay in aysan bixin biilashooda. Isla markiiba ka dib markii la qabtay dad badan oo la shaaciyey, Evans ayaa la weydiistey inuu iska dhigo xarun dhexe oo loo yaqaan 'Playboy'. Markay ahayd 19 jir, waxay noqotay Ciyaar-wadaag Ciyaar-yahankii Bisha ee Oktoobar 2009.
Elle Evans waa atariisho, ugu caansan ‘Scouts Guide to the Zombie Apocalypse’, ‘Muse’ iyo ‘The Love Witch’. Waa la guursaday Matt Bellamy ilaa 2019.
Elle Evans oo qaawan iyo muuqaallo jinsi ah
Halkan waxaa ku yaal qaar badan oo ka mid ah Elle Evans oo qaawan iyo muuqaallo jinsi ah oo ka yimid doorkeeda ugu caansan… Waxay muujisay naasaheeda qaawan iyadoo jareysa qoorta wiilka. Elle Evans ayaa markaa si tartiib ah ugu socotaa nin kale, isaga oo dhunkanaya. Wuxuu ku fariisanayaa kursi iyadoo Elle ay laabatay dhabtiisa. Kadib waxay bilaabeysaa inay isaga si xamaasad leh ula sameyso oo ay galmo sameeyaan, Elle oo muujineysa badhideeda iyo sidoo kale timaheeda qaawan.
Kadib Elle Evans ayaa la arkaa iyadoo xiran shaati ay furtay markii ay ka jeesatay nin. Waxay soo bandhigeysaa boobkeeda marka hore ka hor inta aysan jeesan oo aysan tusin badhkeeda, iyada oo gadaasheeda ka dhigeysa daaha gadaashiisa inta uu ninku daawanayo.
Muuqaalka soo socda, Elle Evans waxay ku qaawan tahay muuqaal galmo galmo nin. Waxay na siisay naasaha qaawan ee naasaha iyo dameerka, sida aan u aragno iyada oo ku dhamaanaysa dusha sare ee ninka fuushan isaga oo qunyar socod ah.
Elle Evans waxay u dhaqaaqeysaa nin xiran kaliya shaati badhan oo hoos u laalaada xagga hore. Waxay banaanka soo dhigtay naasaheeda qaawan, markay ku fuuleyso dhabta dhabta ee ninka oo ay la soo baxayso.
'Tilmaamaha Isbaanishka ee Zombie apopokaly'
Ciyaar saaxiibtinimo Elle Evans ayaa hoos u dhigeysa marxaladda naadiga ka dibna qoob-ka-ciyaarka qoob-ka-ciyaarka xoogaa biibiile casaan ah Waxay si fiican u eegaysaa dameerkeeda oo ay leefleefeysaa tiirka. Si tartiib tartiib ah isu beddelaya zombie illaa ay ka saarto dusheeda si ay u muujiso naasaheeda. Kadibna waxay dul sudhan tahay tiirka iyagoo si fiican u fiirinaya iyaga isla mar ahaantaana qoorteeda waxay bilaabeysaa inay dhiig ku daadato nin.
Ugu dambayntiina waxaa soo uruuriyay dhammaan muuqaaladan qaawan iyo galmada ee Elle Evans ee aan kor uga hadlaynay… Kaliya riix ciyaarta oo ku raaxee daawashada muuqaallada qaawan ee shaashadda.
Elle Evans sawiro qaawan & ciriiri ah
Gabadh qurux badan oo dabiici ah ayaa ku hortaagan. Sidoo kale xubinta taranka ee qaawan, boogaha, ibta, iyo dameerka. Laakiin waxaan horeyba ugu aragnay inji kasta oo jirkeeda kaamil ah muuqaalada kulul. Laakiin sidoo kale horay uma aynaan arkin Elle Evans ’digaag ka hor. Hadda waa waqtigii la arki lahaa jirkeeda oo qaawan, cagaha, iyo lugaha. Waa maxay jirka cajiibka ah ee busty iyo boogaha yaryar ee casiirka leh.
Ku raaxeyso dadweynow oo noo sheeg fikirkaaga ku saabsan galkan qayb ka noqday anaga ururinta nudes caan ah !
Margot Robbie sexy qaawan
Kiernan shipka qaawan Sabrina
deborah ann woll daadinta qaawan
dhallinyarada qaawan Kuuros Miley